Allgedo.com » Kulliyadda Warbaahinta & Saxaafadda ee Jaamicada Ummadda oo dib loo Daahfuray maanta (Sawirro)
Muqdisho, 1 August, 2017: Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya, Mudane Xasan Cali Kheyre, ayaa maanta dib u daahfuray Kulliyadda Cilmiga Warbaahinta iyo Saxaafadda ee Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed.
Munaasabadda daahfurka, waxaa ka soo qaybgalay Ra’iisul Wasaaraha, Wasiirka Warfaafinta, Wasiir-ku-xigeenka Waxbarashada, Guddoomiyaha Guddiga Saxaafada & isgaarsiinta ee Golaha Shacabka, Wasiiradii hore ee Warfaafinta, Maareeye iyo Jaahweyn, Horummudka Kuliyadda Warbaahinta & Saxaafada, wakiillo ka kala socda ururada iyo hey’adaha saxaafadda dalka, xildhibaano iyo saxafiyiin hore.
“Saxaafaddu waxay dhiirrigelisaa horumarka, hiigsiga himillada wanaagsan, tayeynta maamulka wanaagsan iyo xil gudashada madaxda qaybaha kala duwan ee bulshada. Waxayna soo saartaa bulsho isku xiran oo leh hal hadaf oo mideysan” ayuu yiri Ra’iisul Wasaare Khayre.
Ra’iisul wasaaraha, ayaa sheegay in uu aad ugu han-weyn yahay in Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed ay gaarto heer ay soo saarto boqolaal kun oo Jaamiciyiin ah, oo si lacag la’aan ah wax ugu baran doonto.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya, Mudane Xasan Cali Kheyre, ayaa u mahadcelinayay cid walba, oo ka shaqeysay dib-u-soo nooleynta Kuliyadda Cilmiga Warbaahinta iyo Saxaafadda ee Jaamacadda Ummadda.
Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska Mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Eng. Yarisow, ayaa ka hadlay sida Kuliyadda Cilmiga Warbaahinta iyo Saxaafaddu muhiimka ugu tahay tayaynta saxaafadda Soomaaliya, iyo kobcinta aqoonta saxafiyiinta.
“Wasaaradda Warfaafintu, waxay kaalinta kaga aadan ka qaadan doontaa taabagalinta kuliyadda cilmiga warbaahinta iyo saxaafadda. Wasaaraddu waxay horey u ahayd shaqaaleeyaha ugu weyn ee ardayda ka soo qalinjabisa Kulliyaddan, waana kaalin aan markanna diyaar u nahay. Aqoonyahanada Wasaraduna, waxay diyaar u yihiin in ay aqoonta ay leeyihiin u gudbiyaan ardayda kulliyadda dib loo daahfuray ee saxaafadda.”
Wasiirka Warfaafinta, ayaa sheegay in Kuliyaddan dib u daahfurkeeda uu ku soo aaday xilli dalka laga hirgalinayo sharciga saxaafadda iyo istaraatiijiyadda guud ee lagu hagayo warbaahinta dalka.
“Sare u qaadidda aqoonta saxafiyiintu, waxay sare u qaadaysaa wacyiga saxafiyiinta Soomaaliyeed, taasoo kaalin ka qaadan doonta gaar ah horumarinta dalka iyo waxbaridda dadweynaha Soomaaliyeed.” ayuu yiri Mudane Cabdiraxmaan Yariisoow.
Kulliyaddan, waxaa markii ugu horeysay la furay sanadkii 1979-kii, iyadoo qeyb ka ahayd hay’adihii dowladda ee ku burburay dagaaladii sokeeye ee dalka.
Tan iyo burburkii dalka, Soomaaliya kama jirin jaamacad ay dowladda Soomaaliya gacanta ku hayso, waanna markii ugu horeysay ee jaamacadda ummadda dib loo unko. Maantana dib loo daahfuro Kulliyadeeda saxaafadda.